Faallo: Madaxweyne Farmaajo oo la Guddoonsiiyey Buuro rejo ah – Kasmo Newspaper
Faallo: Madaxweyne Farmaajo oo la Guddoonsiiyey Buuro rejo ah
Updated - February 11, 2017 10:33 am GMT
Gudo iyo dibedba waa la dabaaldegay, waxaana isu-soo-bax kasta ka dhigan yahay iyadoo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo sii dhiibayo hanka qaran ee dadweynaha Soomaaliyeed doonayo. Waa buuro in la tafo ayan sahlanayn.
Dabcan, Mdaxweynahani waa ogyahay in himilada, hanka iyo dareenka dadka Soomaaliyeed ka duwan yihiin kuwii jiray 2010. Markii Ra’iisal Wasaare loo magacaabay, Xukuumad waqtigeedu sii dhammaanayey oo ku-meelgaar ahayd.
7ba bilood oo keliya ayuu joogay, oo xukuumaddiisu hawl fiican qabatay, ka dibna waa tii si xaq-darro ah xilka looga qaaday, dadweynuhuna uga jawaabeen banaanbaxyo, ilaa heer dad ku dhinteen, siiba magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo maanta ayuu fursad haystaa, waxaana laga sugayaa in uu dalka ka dhaqaajiyo halka uu yaal.
Farxadda iyo banaanbaxyada dadweynuhu waxay ‘expression’ cad u yihiin diidmada faro-gelinta shisheeye; diidmada musuqa iyo caddaallad-darrada; diidmada beeleynta iyo kala qaybinta dalka; diidmada maqnaan ciidan qaran oo dalka difaaca; diidmo ku tiirsanaan ciidan ajnebi. Diidmo; diidmo, diidmo,…
Waxaas oo isbiirsaday, doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmajo waxay si taariikhi ah u soo bandhigtay in aan qabka iyo awoodda shacbiga Soomaaliyeed la dhayalsan karin.
Quluubta dhallinyarada iyo waayheelka meel walba isaga soo baxay, waxay doonayaan in ay ku dhex noolaadan qaran gob ah (sovereign). Waxay doonayaan in ay arkaan faro-gelinta Addis Ababa iyo Nairobi oo joogsata, iyo in aan Federaalnimadu noqon wax lagu wiiqo dalka.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ummadda Soomaaliyeed siisay kalsooni weyn (full mandate), waxaana laga filayaa in uu kalsoonidaas iyo taageerada shacabku siiyey, uu isbeddel dhab ahi ku yimaado, ka bilaabata Ra’iisal Wasaare aan lagu keenin beel, isaga iyo Golaha Wasiiradada.
Dalku wuxuu u baahan yhahay xukuumad dalka wax u qaban karta, dadkana dhibaatada ka saari karata.
Hanka iyo rejada dadka Soomaaliyeed halkaas ayey jirtaa. Taas ayey ka sugayaan hoggaamiyaha la doortay, isaguna ku guuleysan karaa.